Ukufakwa kweNkokeli kwiDijithali kuTshintsha njani? Martech Zone
Ukufakwa kweNkokeli kwiDijithali kuTshintsha njani
NgoMvulo, Oktobha 24, 2016 NgoMvulo, Oktobha 24, 2016 U-Muhammad Yasin
Ukubanjwa kwelothe bekukho ithutyana. Njengokuba kunjalo, maninzi kangakanani amashishini alawula i-GET. Abathengi bandwendwela iwebhusayithi yakho, bazalisa ifom yokukhangela ulwazi, uqokelela olo lwazi emva koko ubabize. Elula, akunjalo? Ehh… hayi njengoko ucinga.
Umxholo, ngokwawo, uphambene ngokulula. Kwithiyori, kufanelekile ukuba kube lula ukuba kubambe uninzi lwezikhokelo. Ngelishwa, akunjalo. Nangona kusenokwenzeka ukuba kwakulula ngokulula kwiminyaka elishumi eyadlulayo, abathengi baye boyikisa ngakumbi ngokushiya ulwazi lwabo. Ukucinga ukuba (umthengi) uza kufaka ulwazi lwabo kwifom (ngenjongo yokufumana ulwazi) kwaye baya kuqhushumbiswa ngeefowuni, ii-imeyile, izicatshulwa, i-imeyile ngqo njalo njalo. Nangona oku kungenjalo kuwo onke amashishini, abanye banakho kwaye baya kuqubha amathemba ngezi zinto zibonelelweyo- kwaye iyacaphukisa.
Oko bekutshiwo, bambalwa kwaye bambalwa abathengi abagcwalisa iifom ezikhokelayo.
Ngoku, xa ndisithi iifom ze-static lead, ndithetha iifom ezimfutshane ezinendawo ezine-4-5 zolwazi lwakho loqhakamshelwano (igama, inombolo yefowuni, i-imeyile, idilesi, njl. Njl. ingxelo. Iifom azihlali zithatha indawo yetoni kwiphepha (ke azinangqondo), kodwa aziboneleli ngexabiso elibonakalayo kumthengi nokuba.
Kwiimeko ezininzi, abathengi bazalisa ulwazi lwabo ukuze bafumane ulwazi olongezelelweyo (kwishishini) kamva. Ngelixa akukho nto iphosakeleyo kule meko, ulwazi olongezelelekileyo izicelo zabathengi luphela luguqulela kwintengiso. Nokuba umthengi ufumana ulwazi alucelileyo, basenokungafuni ukuthengiswa okwangoku-ngakumbi ukuba bakwisigaba sophando.
Iifom zohlobo lwe-static ezikhokelayo zihlala zikhona, kodwa ziyafa ngokukhawuleza ukwenza indlela yeendlela eziguqukayo ngakumbi zedigital lead lead. Iifom zokukhulisa iinkokeli (okanye amaqonga endaweni yoko) ziya ziba sleeker kwaye zihambele phambili ukulungiselela iimfuno kunye neemfuno zabathengi-zinika abathengi isizathu sokunika ishishini ulwazi lwabo. Nantsi indlela ekubanjweni kwedijithali ekhokelela ekuguqukeni:
Iifom zeNkokeli zeNkokeli ziba "ziNxibelelanayo" kunye "nokuzibandakanya"
Iifom zokukhokela ezi-static zezi: static. Ababhenisi; kwaye ngokunyanisekileyo, bayakhathaza. Ukuba ibonakala iyadika (okanye imbi kakhulu, ayibonakali isemthethweni), amathuba okuba abathengi bazalise ulwazi lwabo mancinci. Ayisiyo kuphela ukuba abathengi bafuna ukucinga ngento epholileyo okanye eyonwabisayo eza ngendlela yabo (kwaye ukuba yonke into iyakhanya kwaye iyakhazimla, kunokuba njalo), bafuna ukuqinisekisa ukuba ulwazi lwabo aluthengiswa kumaqela amathathu okanye lusetyenziswe ngokungekho mthethweni. Bafuna ukwazi ukuba ulwazi luya kwabo bathi luya kubo.
Enye yezona zinto zinkulu ezenzekayo ukukhokelela kwiifom kukuba ziba lula, ukusebenzisana ngakumbi kunye nokubandakanya ngakumbi.
Endaweni yefom ecela ulwazi olulula lokunxibelelana, imibuzo emininzi iyabuzwa- kunye nokukhusela isithukuthezi, le mibuzo iboniswa ngeendlela ezizodwa.
Amashishini amaninzi sele eqalile ukusebenzisa iimenyu ezilahlayo, ukhetho oluninzi, kwaye kwanombhalo uqobo ugcwalisa ukuqinisekisa ukuba umboleki uhlala ebakhathalele. Ukongeza, iifom zokukhokela ziba ngokwezifiso kakhulu, kwaye amashishini ngoku ayakwazi ukubuza imibuzo enokuba ngumdla kumthengi. Endaweni yokuziva ngathi ufaka isicelo, le fomathi intsha iguqukileyo ngathi ugcwalisa iprofayili- enokuthunyelwa kumthengisi oza kubanceda kunokuba ayithengisele bona.
Abathengi banikezelwa ngeXABISO LOKWENENE
Ukuba ubuyela umva nje kangangeminyaka emihlanu, uyakhumbula ukuba uninzi lweefom zokugcwalisa yayiziindlela nje zokucela ulwazi ngakumbi. Ungabeka ulwazi lwakho loqhakamshelwano, mhlawumbi ulwazi oluthile olukhethiweyo, uya kubetha ungenise kwaye ulinde umntu oza kuqhagamshelana nawe. Ngamanye amaxesha ungabhalisela ileta yeendaba yenyanga okanye enye into efanayo- kodwa ke, akukho nto ibalulekileyo.
Ukukhawuleza phambili kule minyaka mihlanu, kwaye ngoku sifumanisa ukuba kunye neefom ezimileyo ziyahamba, ukugcwalisa iifom zokukhokela kuye kwaba yinto yotshintshiselwano. Endaweni yokufumana impendulo enje ngo “Enkosi ngokungenisa ifom yakho. Umntu othile uza kufikelela kungekudala, ”abathengi baphathwa ngoko nangoko kwimveliso / kwiinkonzo, izaphulelo, kwaye kwiimeko ezininzi ukusukela mva, iziphumo zovavanyo!
Enye yezinto ezintsha ezijonge phambili kubakhenkethi kwiwebhusayithi kukuthatha imibuzo kunye nokuzalisa uvavanyo.
Umzekelo olungileyo woku ingayinto "Luhlobo luni lwemoto olukufaneleyo?" uvavanyo. Olu luhlobo lovavanyo esinokuzibona silubonelela kubaxumi bethu beemoto ngenjongo ukuvelisa ukuthengisa okutsha kukhokelela kwintengiso. Kolu vavanyo, umthengi uphendula imibuzo malunga nokuthenga / ukuqhuba nokukhetha. Nje ukuba bangenise iimpendulo zabo, iziphumo zabo ziveliswa kwangoko. Ukwenza oku, ewe, kufuneka banikezele ngolwazi lwabo lokunxibelelana. Ukuba umthengi unomdla ngokwaneleyo (kwaye sinethemba lokuba), baya kufaka i-imeyile, kwaye baya kufumana iziphumo zabo.
Endaweni yokunika kwaye uthathe uhlobo lweemeko, iifom zokukhokela ziye zasebenzisana ngakumbi; ukukhuthaza ukutshintshiselana ngokulinganayo phakathi komthengi kunye neshishini.
Ukuba umboleki ugcwalisa "Yeyiphi imoto ekufaneleyo?" Uvavanyo kwaye bathi banosapho olukhulu, banokufumana ivawutsha yokuvavanya ukuqhuba i-minivan ethile. Okanye, kungcono, banokufumana isithembiso esikhawulezileyo se- $ 500 kwisithuthi sosapho. Xa kufikwa ekunikezeleni ngexabiso kubathengi, amathuba awanakuphela.
Ngokuphuculwa kwetekhnoloji ngokukhawuleza njengoko injalo, uninzi lwababoneleli beefom abakhokelayo banokuthatha ngokuzenzekelayo ulwazi abathengi bangene kwifom ekhokelayo kwaye bayiguqulele kwisibonelelo esifanelekileyo kumthengi. Iifom zokukhokela azisekho kunangaphambili. Baye bavela kwinto enkulu kakhulu kunoko abathengisi abaninzi babenokucinga. Njengoko itekhnoloji yokubamba ekhokelayo iqhubeka ukuphucula kunye nokuvela, iimveliso kufuneka zitshintshe inkqubo yabo yokubamba ekhokelayo!
tags: Uvavanyo lwabathengiukubanjwa kwabathengi phambiliukubanjwa kwedijithali ekhokelayoumxholo wee-interactiveamava adibeneyoukuhanjiswa kokubanjwa okuqhubayoi-intanethi ekhokelela ekubanjwenibamba phambili
Ngaba iiFomu zeNkokeli zifile?
Uyenza njani iQhinga lokuThengisa ukuze wandise iAdoption yakho yoKwamkelwa?